ဦးသန်းရွှေ လက်တွဲလျှောက်နေရပြီး ရှင် ကြည့်လိုက်ကြ နော်....။
သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေပေမယ့် အိုမင်းခြင်းရဲ့ဝေဒနာကို သန်းရွှေ ခံစားနေရပါပြီ။
ဘုရားကျောင်းကန်တွေကို သွားရောက်ဖူးမြော်နေပေမယ့် ကိုယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုတွေကို နောင်တမရ သင်ခန်းစာ မယူနိုင်သ၍၊ ကိုယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက်တွေကို မသုံးသပ်မိဘဲ မရပ်သ၍၊ သတ်ဖြတ်စော်ကားမှုတွေအတွက် မှားယွင်းကြောင်း မပြောမဆို ၀န်မခံသ၍၊ တိုင်းသူပြည်သား လူအများကို ဆက်လက် ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်နေသ၍ သန်းရွှေ အတွက် ကြီးမားသော ၀ဋ်ကြွေးဒဏ်တွေ လောကအပြစ်ဒဏ်တွေကို ယခုဘ၀မှာရော နောင်အဆက်ဆက်ရော မကြာခင် ကြီးမားပြင်းထန်စွာနဲ့ခံစားရတော့မှာပါ။
ရာထူးအာဏာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဘယ်လောက်ပြည့်ဝနေပါစေ သတ္တ၀ါတိုင်း လွန်ဆန်မရတဲ့ နာခြင်း အိုခြင်း သေခြင်း ဒုက္ခကို နအဖခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေ လက်တွေ့စတင် ကြုံနေရပါပြီ။
ယခု သတင်း ကို ပေးသော .... ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 14, 2009
ညနက်သန်းခေါင်မှာ ကျမအိပ်ယာကနိုးလာပါတယ်။အမှန်ကတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျမနိုးလာတာပါ။
ပန်းခြံလေးတခုထဲမှာသမီးလေးနှင့်ကျမတူတူပုန်းတမ်းကစားနေပါတယ်။ကျမကပုန်းနေပြီး သမီးလေးကလိုက်ရှာနေပါတယ်။သစ်ပင်တပင်ရဲ့နောက်ကွယ်ကနေသမီးလေးကိုကြည့်နေမိပါတယ်။ မျက်နှာမှာချိုသာလှတဲ့အပြုံးလေးနဲ့အလွန်ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့သမီးလေးဟာကျမကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြိုးစားပန်းစာလိုက်ရှာနေပါတယ်။
သမီးလေးကို ကျမထွက်ပြမယ်လို့ ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သမီးလေးနားက အရိပ် ထဲမှာ
သူတို့ကိုတော့ရှာမတွေ့စေလိုပါဘူး။အပြစ်ကင်းစင်လှတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ကျမကို လိုက်ရှာနေတဲ့
သမီးလေးကို ကျမ မြင်နေရပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ သူတို့တွေက ကျမကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး အသူတရာ ချောက်ထဲကိုပစ်ချ
လိုက်ပါတော့တယ်။ကျမလည်း အိပ်မက်ဆိုးကနေ လန့်နိုးလာခဲ့ပြီး ကျမပါးပြင်မှာ
ကျမအမျိုးသားကိုဂျင်မီလို့ အသိများကြတဲ့ကိုကျော်မင်းယုကို စစ်အာဏာရှင်တိုရဲ့ လုံခြုံရေး
ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစုစည်းထားပြီး “၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ”
လို့ခေါ်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အတိုက်အခံအုပ်စုမှာ သူဟာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သွားပါတယ်..။မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်အောင်ဖန်းတီးနေပြီးအုံကြွမှုများဖြစ်အောင်လှုံဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလည်း ဖြစ်ဖူးတာမို့ကျမအမျိုးသားနှင့်သူအပေါင်းအသင်းတွေဟာစစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စစ်ကြောရေး
ဒါကြောင့် ကျမကိုဖမ်းဖို့ သူတို့နောက်တခေါက် လာတဲ့အချိန်မှာကျမဟာသမီးလေးနှင့်အတူထွက်ပြေး
ဒါပေမယ့် ပုန်းအောင်းဖို့ အတွက် တနေရာကနေ တနေရာကို လျှိ့ဝှက်ရွေးရတာဟာ အလွန်တရာ
ခက်ခဲပြီးအသည်းထိန်စရာပါပဲ။ဒီဒုက္ခတွေကို ကျမသမီးလေးလည်းမျှဝေခံစားနေရတာ ကျမ
တွေဆီပြန်ပို့ထားဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ ယခုချိန်မှာ ကျမသမီးလေးကိုအရမ်းလွမ်းနေပါတယ်..။
မိမိအိမ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ အန်တီရှိရာတက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းကို ကျမရဲ့
ကျမတို့တိုင်းပြည်ကို အင်းအားတွေ၊ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေသုံးပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့
ဲငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းဖြင့်လွတ်လပ်မှု ၊တရားမှုတမှု၊ နှင့်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်
တခုကိုကျင်းပပါတော့မယ်။၂၀၀၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅ကိုအခြေခံပြီးနှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပါ။
လက်နက်ကိုင်ပဋိက္ခဖြစ်နေသည့် အခြေအနေ များတွင် လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံသည့်
အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့်
ရာဇဝတ်မှုများ အကျုံးဝင်ချင်း မရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်ကြောင်းအလေးအနက်
ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘာပတိအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်
ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီး၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံးရေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဒဏ်တွေကိုခံစားနေကြရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုသူတုို့တွေ
ယနေ့အချိန်အခါတွင် ပဋိပက္ခကြီးနှစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ တခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံ
အင်အားစုအများအကြားတောက်လောက်နေဆဲနှစ်၅၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်း
စစ်ပစ္စည်းများတွေနှင့်စားနပ်ရိက္ခာတွေသယ်ယူဘို့အတွက်အမျိုးသမီးများကိုပေါ်တာအဖြစ် နှင့်နေဖက်မှာခိုင်းပါတယ်။ ညဖက်မှာတော့ လိင်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် ခိုင်းပါတယ်။
သက်သေအထောက်အထားများကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံ
လှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးများစွာဟာ ရိုက်နှက်ခံကြရ၊ ဖမ်းဆီးခံကြရ၊ညဉ်းပန်းခံရပြီးနောက်
အသုံးချတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ မိခင်နှင့်အတူရှိနေတဲ့ ကလေးတွေ၊
အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ့ဲ့ပဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးတွေ အမြောက်အများရှိပါတယ်။
နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်းတိုင်းဒဏ်နှင့် မုန်းတိုင်းအပြီးငတ်မွတ် မှုတွေ ကူးစက် ရောဂါတွေနဲ့
အခုဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာ ဒေါက်တာရိုက်စ် နှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအခြား
အချို့ဗြူရိုကရက်တွေရဲ့“ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချ”တဲ့ မူဝါဒတွေဟာ အလွန်ရှက်စရာပါပဲ။မြန်မာအမျိုးသမီး
တွေကိုချက်ချင်းလက်ငင်းကူညီဖို့အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတာကတော့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး
The Nation, June 19,2008
တွင်ပါရှိသော Who will save Burma's Women and Children? by Nilar Thein
ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ပြန်လည် တင်ပြ ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃ ရက်နေ့ရ ဘဘဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုညီညီအောင်သတင်းများ....။
အဖွဲ့ချုပ်(ဒု) ဥက္ကဋ္ဌ ဘဘဦးတင်ဦး နှင့်ဒေါက်တာဒေါ်တင်မိုးဝေတို့၏နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုမင်္ဂလာပွဲ ယနေ့အဖွဲချုပ်ရုံး၌ ပြုလုပ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားနေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချခံထားရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ဒု)ဥက္ကဋ္ဌ ဘဘ(သူရ)ဦးတင်ဦးတို့ရဲ့ နှစ်(၅၀)မြောက်ရွှေရတု မင်္ဂလာပွဲ အတွက် ဆုတောင်းပွဲကို အဖွဲချုပ်ဗဟို အ မျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဦးစီး၍ ယနေ့ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ ဘဘဦးတင်ဦးကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပြည်သူများနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ (၂၀၀)ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ တက်ရောက်လာသူများ အား ကြာဇံဟင်းခါးဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ကြကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
နောက်တပတ်မှာ ထုတ်ပြန်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် အကြံပြုချက်။
လာမည့် တနင်္လာနေ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် အကြံပြုချက်ဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ အာလုံးအတွက် အနာဂတ်မှာ ကောင်းမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုချက်ဖြစ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံအမှု ဗဟိုတရားရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုတင်။....။
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံ အမှုကို ဗဟိုတရားရုံးသို့ ပြင်ဆင်မှု တင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေလည်းဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
" ဒီနေ့ တိုင်းတရားရုံးက အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့က အယူခံကိုငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုအတွက် ဗဟိုတရားရုံးကို ပြင်ဆင်မှုတင်လိုက်ပါပြီ။ ဆရာဦးကြည်ဝင်း သွားတင်တာပါ... အန်ကယ်က ကိုညီညီအောင် အမှုအတွက် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးကို သွားနေရလို့ပါ။ လာမယ့်သောကြာနေ့မှာ အယူခံအမှုအတွက် တရားရုံး Notice Board ပါမပါ စောင်ကြည့်ရမှာပါ " သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး နအဖဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ အမိန့်ဖြင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲဖြင့် ဆိုင်းငံ့ပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများမှ တိုင်းတရားသို့ အယူခံတင်သွင်းခဲ့ပြီး တိုင်းတရားရုံးက အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့က အယူခံကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု ထပ်မံ၍ ဗဟိုတရားရုံးကို ပြင်ဆင်မှု တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင် အမှု သောကြာနေ့တိုင်း စစ်ဆေးမည်။
ယနေ့အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကိုညီညီအောင် အမှုနဲပတ်သတ်ပြီး " ဒီနေ့ မနက်(၁၀) နာရီကနေ နေ့လည် (၁)နာရီ အထိ ကိုညီညီအောင်အမှု အတွက် အစိုးရသက်သေ ရဲအရာရှိ (၂)ဦးကို စစ်ပါတယ်။ ကိုညီညီအောင်နဲ့လည်း ခဏစကားပြောခွင့်ရပါတယ်။ အစိုးရ သက်သေတွေ အားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှ ကိုညီညီအောင်ကို စစ်မှာပါ။ ကိုညီညီအောင် ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်။ နောက်တပါတ်(၂၀)ရက်နေ့ သောကြာနေ့ကို ချိန်းပါတယ်။ ကိုညီညီအောင် အမှုကိုတော့ သောကြာနေ့တိုင်း စစ်မယ် ပြောပါတယ်" ။
သတင်း ပေးပို့ လာသူ..ဒီမိုဝေယံ..။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်
The Voice ဂျာနယ်။..။
သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး တိတ်တဆိတ် နုတ်ထွက် ..။
နို့ဘိုး ယာယီဒုက္ခသည် စခန်းကို ထိုင်းဘက်မှ ဖိအားပေးမှု များလာ....။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးး ထိန်းချုပ်ရာ တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေကို နအဖနဲ့ ဒီကေဘီအေ ပူးပေါင်းတပ်တွေက ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးခိုလှုံနေတဲ့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ဒေသခံ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက အိမ်ပြန်ဖို့ ဖိအားပေး ပြောဆိုနေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်ခ်ခရိုင်၊ ထဆောင်ယန်းမြို့နယ်ရှိ နို့ဘိုး ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နယ်မြေခံ ထိုင်းစစ်တပ်က ဒုက္ခသည်တွေ နေအိမ်ပြန်ဖို့ အတင်းဖိအားပေး နေတာကြောင့် တချို့ပြောင်းရွှေ့ ကုန်ကြပြီလို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ နယ်မြေခံ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် တချို့ မြန်မာပြည်ဘက် ပြန်သွားကြသလို တချို့က စခန်းကနေထွက်ပြီး တခြားနေရာကို ပြောင်းရွှေ့ ကုန်တယ်လို့ စခန်းတာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ၁၅ ရက်အတွင်းမှာ ပြောင်းရမယ်။ တကယ်လို့ ဘဲကလော် မသွားချင်တဲ့ သူတွေက အခုကတည်းက ထွက်ထားလို့ ရတယ်။ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ ပြန်လို့ရတယ်လို့ သူတို့က ပြောတယ်။ တချို့လူတွေက စိတ်ပျက်ပြီး ပြန်ကြတာ ရှိတယ်။
“သူတို့ ဘယ်လို ခြိမ်းခြောက်လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့အထဲမှာ ကေအန်ယူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးမယ်၊ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေပါ အကုန်လုံး ဖမ်းမယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။ ဒီနေ့အထိ သူတို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လာမလုပ်သေးဘူး။ တချို့က ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်သွားတာ မိသားစု ၂၉ အိမ်ထောင် ရှိပါတယ်။” စခန်းကနေ ထွက်သွားတဲ့ မိသားစု ၂၉ စုထဲက ၄ စုမှာ သူတို့နေထိုင်ရာ ရွာတွေဘက်ကို ပြန်သွားကြပေမယ့် ကျန်သူတွေက သူတို‹အပေါ် စာနာတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဖွား ကရင်တွေရဲ့ နေအိမ်တွေမှာ ပြောင်းရွှေ့ ခိုလှုံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက နအဖနဲ့ ဒီကေ ဘီအေတပ်တို့ ပူးတွဲပြီး ကေအန်ယူတပ်မဟာ ၇ ကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဒေသခံကရင်ရွာသား ၄,ဝဝဝ လောက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အိမ်ထောင်စု ၁၅ဝ ခန့်ဟာ နို့ဘိုးရွာနားမှာ စုဝေးနေထိုင်တာကို အစွဲပြုပြီး နို့ဘိုးယာယီဒုက္ခသည်စခန်းလို့ ခေါ်ဝေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းကို ဆက်ဖွင့်ခွင့် တားမြစ်ခံရတာကြောင့် ကလေး ၂ဝဝ ကျော် ကျောင်းမတက်နိုင် ဖြစ်နေတယ်လို့ အဲဒီ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ “စာသင်ခန်းကို တာလပတ်နဲ့ မိုးထားတာ ဆွေးပြီး ပျက်သွားလို့ ဖျက်လိုက်ပြီး အသစ်ပြန်မိုးမယ်လို့ ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ လာတွေ့သွားတယ်။ မမိုးရသေးဘူး၊ ကျောင်းကို ငါတို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လာကြည့်ကြမယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ တပတ်၊ နှစ်ပတ် စောင့်တယ်။ “ကျောင်းကဖွင့်ပြီး စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ ကျောင်းပိတ်ထားတာ နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ် ကျော်သွားတော့ သူတို့ လာတွေ့တယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူ မိုးခိုင်းတာလဲ။ ကျနော်တို့ ဘာမှ အမိန့် မချမှတ်သေးဘူး။ ခင်ဗျားတို့ စိတ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်တယ်။ မလုပ်ရဘူးတဲ့ ချက်ချင်း ရပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အခုအချိန်အထိ အမိုးကိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး၊ကျောင်းကဒီအတိုင်းပဲ။လောလောဆယ်ကလေးတွေလည်းကျောင်းမ
ဒီယာယီကျောင်းလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လလယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်မှာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် ခွင့်မပြုသေးလို့ကျောင်းပိတ်ထားရတာပါ။ ဒီလိုပိတ်ပင်၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပိုပြီးအနာဂတ်မဲ့သလိုခံစားရတယ်လို့ဒုက္ခသည်
“ကျနော်တို့ ရွာမှာ မနေရဲတော့လို့ ဒီဘက်ကမ်းကို ယာယီအနေနဲ့ ခိုလှုံတာပါ။ တသက်လုံး နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲတွေရှိလို့ ခိုလှုံတာကို ထိုင်းဘက်က ဒီလို ကြောက်ရွံ့အောင် ပြောဆိုတာကြောင့် ကျတော်တို့ ဒုက္ခသည်တွေ တချို့ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး၊ တချို့သူတွေဆိုရင် စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ ရောဂါ ရလာတာ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဆိုရင် ထွက်သွားချင်ပေမယ့် ဘယ်ကို သွားရမှန်း မသိဘူး။ ” ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်း ဆယ်ခုဝန်းကျင်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ တ သိန်းခွဲလောက် ခိုလှုံနေကြကာ အများစုက ကရင်လူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 13, 2009
ကောင်းကင်ကြီး နီလာပြီဆိုမှဖြင့် …...။
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက် ပြီးတာ ၂ နှစ်ပြည့်ခါနီးပြီ ဆိုပေမယ့် မနေ့တနေ့ ကဖြစ်သွားခဲ့သလိုပဲ၊ တုန်လှုပ်ခြောက် ခြားနေ ဆဲပါ။ နာဂစ်တိုက်ခိုက်တာထက် ပိုပြီးတုန်လှုပ် စရာကောင်းတာကတော့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အ စည်းတွေရဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ပြည်သူတွေအပေါ် မှာထားတဲ့ သဘောထားပါ။
၂ဝဝ၈ ခု မေလ ၂ ရက်နေ့က ကျမရဲ့ လက် ကိုင်ဖုန်းထဲ massage တခု ဝင်လာပါတယ်။ အ လွန်အားပြင်းတဲ့ မုန်တိုင်းတလုံးက မြန်မာနိုင်ငံ ဆီကို ဦးတည်ပြီး ဝင်ရောက်လာနေပြီတဲ့။ ကျမ တို့က မယုံကြပါဘူး၊ တခါမှလည်း မြန်မာပြည်မှာ မုန်တိုင်းအကြီးအကျယ် မတိုက် ဘူးသလို၊ ကျမတို့ငယ်ငယ်ကသင်ရတဲ့ ပထဝီမှာလဲ မြန်မာပြည်မှာ တောင်တန်းတွေ၊ သစ်တောတွေ၊ ဒီရေတောတွေ ကာရံထားတဲ့အတွက် ဖျက်အားပြင်းတဲ့ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ဖို့က မ လွယ်ဘူးတဲ့လေ၊ အသက် ၈ဝ ကျော်တဲ့ ကျမ အဖွားတောင် သူ့တသက် ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ မုန်တိုင်းမျိုး မကြုံဘူးသေးဘူးတဲ့၊ ဒါကြောင့် ကျမတို့ ဘာကိုမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားပါဘူး။
အဲဒီနေ့ကလဲ ရန်ကုန်တမြို့လုံး မီးပြတ်နေပါတယ်၊ လုံးဝမီးမလာပါဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာကိုက ဓါတ်ဆီတဂါလံကို ကျပ် ၄,၅ဝဝ ကနေ ၅,ဝဝဝ အထိရှိတော့ လူတွေကမလိုအပ်ရင် မီးစက်မသုံးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနွေရာသီဟာ မီးအင်မတန်ပြတ်တဲ့ ရာသီမို့လို့ မီးလာမှ အားသွင်းလို့ရတဲ့ အင်ဗာတာဟာ သိပ်တော့အသုံးမတဲ့လှပါဘူး။ ဒီတော့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကို ဘယ်သူကမှအရေးတယူ ဖွင့်မကြည့် ဖြစ်ပါဘူး။
အဲဒီတုန်းက ကျမ နေတာက တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ထဲက TOSTA အိမ်ယာမှာပါ။ အဲဒီတိုက်ခန်းတွဲတွေက ၅ ထပ်တိုက်တွေပါ။ ကျမက ပထမထပ်မှာနေပါတယ်။ ည ၁၂ နာရီလောက်မှာ လေပြင်းတွေစတိုက်ပါတယ်။ လေဟာ ရွှီ ကနဲ အော်မြည်ပြီး တိုက်လာတာပါ။ ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ လေထုဟာတိုက်ကိုဝင်ဆောင့်လိုက်ပြီး တိုက်ဟာသိမ့်ကနဲ တချက်တုန်ခါသွားပါတယ်။ ခေါင်မိုးပေါ်ကသွပ် တွေဟာလည်း ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ် သံနဲ့ ဆူညံနေပါတယ်။ ပြတင်းမှန်တွေ ကွဲသံကလည်း ဆူညံနေတာပါပဲ။ တိုက်ခန်းအားလုံးကလူတွေ ဟာ ကြောက်လန့်တကြား တံခါးတွေဖွင့်ပြီး ထွက်ကြည့်ကြပါတယ်။ လူတွေအကုန်လုံးဟာ တိုက်တွေပြိုကျမှာကို ကြောက်လန့်နေကြ ပါတယ်။ တိုက်တွေကလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို သိမ့်သိမ့်တုန်နေပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေက ပြောလို့ရနေပါသေးတယ်။ ကျမ မိတ်ဆွေ အင်ဂျင်နီယာတယောက်က ကျမဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး တိုက်ခန်းတွေ တံခါးတွေအကုန်ဖွင့်ထားဖို့ အကြောင်းကြားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမတို့တွေလည်း တအိမ်နဲ့တအိမ် အကြောင်းကြားပြီး တံခါး တွေဖွင့်ခိုင်းထားရပါတယ်။ လေကတော့လျှော့မသွားဘဲ တဖြေးဖြေး ပိုတိုးပြီးတိုက်နေပါတယ်။ ဒါတောင်မှပဲ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာ လှည့်ထားတဲ့ တိုက်တတိုက်က စောင်းသွားပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မနက် ၄ နာရီလောက်ရောက်တော့ မုန်တိုင်းရဲ့ အားအပြင်းဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာပါတယ်။ ၅ လွှာမှာနေတဲ့လူတွေလည်း အောက်ကိုပြေးဆင်း လာကြပါတယ်။ သူတို့အခန်းမှာသွပ်တွေတချပ်မှ မရှိတော့ပါဘူး။ အိုးတွေ၊ ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေဟာလည်း လေနဲ့အတူလွင့်ပါသွားကြတယ်တဲ့၊ ကျမတို့တိုက်ဝန်းထဲမှာလည်း သစ်ပင်တွေကပြိုလဲကျပြီး လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ ကုန်ပါတယ်။ ၅ လွာမှာ သွပ်တွေအကုန်ကွာထွက်ကုန်တော့ သူတို့အခန်းတွေက မိုးရေတွေနဲ့ပြည့်ပြီး ကျန်တဲ့အောက်ထပ်က အခန်းတွေကို မိုးရေတွေ စီးကုန်ပါတယ်။
ဒီလောက် လေတွေပြင်းတဲ့ကြားထဲက လွင့်ပျံနေတဲ့သွပ်တွေကို မကြောက်မရွံ့လိုက်ကောက်နေတဲ လူတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ တွေကတော့ ရပ်ကွက်တွေထဲက ဆင်းရဲသားတွေဖြစ်ပြီး၊ တချို့က မြေညီထပ်ကလူတွေပါ။ အမှန်တော့ သွပ်နဲ့မြေညီထပ်က လူ တွေနဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ပေမယ့် ရသလောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ကောက်နေကြတာပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ကျမတို့ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦး သာရင် တောင်ပါသေး။
ကျမတို့နဲ့ တရပ်ကွက်တည်းပဲ ဘေးနားမှာ ရိုးရိုး အိမ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအိမ်တွေကတော့ လဲကျ တဲ့အိမ်လဲ၊ ပြိုတဲ့အိမ်ပြိုနဲ့ အုတ်အော်သောင်း တင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ပြိုကျသွားတဲ့အိမ်၊ လဲ သွားတဲ့အိမ်က လူတွေခင်မျာ ကိုယ့်အထုတ် ကိုယ်ပိုက်ပြီး တခြားအိမ်တွေပေါ် တက်နေကြရ ပါတယ်။ အိမ်တလုံးကို လူအယောက် ၄ဝ၊ ၅ဝ လောက် နေ နေကြရပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုန်းတွေက မနက် ၁ဝ နာရီလောက် အထိ ခေါ်လို့ရနေပါသေးတယ်။ ကျမဆီကို DVB က ကိုထက်အောင်ကျော် ဖုန်းခေါ်တာ နောက် ဆုံးပါပဲ။ မုန်တိုင်းအခြေအနေကို မေးတာပါ၊ ပြောနေရင်းနဲ့ ဖုန်းလိုင်းကပြတ်သွားပါတယ်။ ဓါတ်တိုင်တွေလဲ ပြိုကျပျက်ဆီးသွားပြီ ဆိုတော့ မီးပြန်လာဘို့ အတော်စောင့်ရမယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းနားလည်ထားကြပါတယ်။
နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ကစပြီး တဖြေးဖြေးလေငြိမ်သွားပါတယ်။ လေငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ရှင်မတွေက နီးစပ်ရာဆိုင်မှာ ပစ္စည်း ပစ္စယတွေ ပြေးဝယ်ကြရပါတယ်။ အိမ်မှာရှိကြတဲ့ ယောက်ျားတွေက လမ်းမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ဖယ်ရှားတဲ့အလုပ်ကို ထွက် လုပ်ကြရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သံဃာတော်တွေပါရောက်လာပြီး ဝိုင်းကူရှင်းပေးကြပါတယ်။ တချိန်လုံး သွပ်ထွက်ကောက်နေ တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအိမ်က ယောက်ျားတွေ တဦးတလေမှ ထွက်မလာကြပါဘူး။ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ ကြံဖွံ့တွေကလဲ အိပ်မောကျနေဆဲပါ။ ယောင်လို့ တောင်မှမတွေ့ရပါဘူး။
ညနေ ၆ နာရီမှာ ရေဒီယိုကနေ VOA သတင်း စလာပါတယ်။ VOA သတင်းက ဧရာဝတီတိုင်းရဲ့ ကြေကွဲဘွယ်အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြေညာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ န.အ.ဖ က ကယ်ဆယ်ရေးတောင် မလုပ်သေးပါဘူး။ မေလ ၁ဝ ရက်နေ့ကို အခြေခံဥပဒေ ထောက် ခံပွဲလုပ်ဖို့ကိုပဲ ပြင်ဆင်နေတုန်းပါ။ လူတွေက ဒီပွဲကို စိတ်မဝင်စားနိုင်ကြပါဘူး။ (စကားချပ်- ကျမတို့နေတဲ့ တိုက်ဝန်းမှာ တိုက်ခန်းပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ လူအတော်များများက ကြက်ခြေခတ်လိုက်ပေမယ့်လည်း မဲရုံကမဲရေတွက်လိုက် တော့ ၉၆.၈၈% နဲ့ ထောက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲ)။ မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်ယာတွေကိုပြင်ဆင်ဘို့ စရိတ်စကအတွက် ပူပန် သောက ရောက်နေကြပါတယ်။
နောက်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ဈေးထဲမှာ ဆန်တွေ၊ ဆီတွေကအစ နောက်ဖေးချောင်သုံးပစ္စည်းတွေ အဆမတန် ဈေးတက်သွားပါ တယ် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက တံခါးတချပ်ပဲဖွင့်ပြီး ကြိုက်ဈေးနဲ့ရောင်းနေပါတယ်။ သွပ်တချပ်ကို ကျပ် ၁၅,ဝဝဝ နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ ဓနိတရာကို ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ လောက်အထိ ဈေးတက်သွားပြီး၊ အိမ်ရိုက်သံတွေလည်း ၃ ဆခန့်မျှအထိ ခုန်တက် သွားပါတယ်။
မီးလာဖို့ မမြင်တဲ့အတွက် ဓါတ်ဆီတဂါလံကို ကျပ် ၆,ဝဝဝ ကျော်သွားပြီး။ ဒီဇယ်တဂါလံကို ၇,၅ဝဝိ နဲ့ ရောင်းချကြပါတယ်။ တမြို့လုံး သွားလာဆက်သွယ်မှုတွေ ပြတ်တောက်သွားပြီး လူတွေအားလုံးဟာ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမယ်ဆိုတာ သေချာမသိသလို။ အနာဂတ် ဟာ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ ဆိုတာကို မှန်းဆဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကလည်း အထဲကဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သတင်းတွေကိုကြားရပါတယ်။ ပြည်တွင်းကလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်း အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီကို ဝိုင်းကူညီဖို့ နေညမဆိုင်း ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ န. အ.ဖ က ဘာမှထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာမြန်မာ့အသံက သတင်းတွေလိုက်ရိုက်တဲ့ အချိန်ကလေးအတွင်းပဲ ရဲတို့၊ စစ်သားတို့ကို တွေ့မြင်ရပြီး။ ကျန်အချိန်တွေမှာ ရဲ၊ စစ်သား၊ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုသူတွေ ပျောက်ဆုံးနေဆဲပါ။
ကျမတို့ကြီးကြီး ဒေါ်ကြည်ဦး (ကိုဇာဂနာ မိခင်) ထံရောက်အောင်ကြိုးစားပြီး သွားပါတယ်။ ကြီးကြီးနဲ့တွေ့တော့ အရေးပေါ်အနေနဲ့ အ ဝတ်အစားတွေ၊ စားစရာတွေ လိုအပ်နေတယ်၊ အဲဒါကို အလှူခံပေးပါဆိုလို့၊ ကျမတို့လဲလိုက်အလှူခံပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လိုင်းကား တွေ မထွက်ကြဘဲ ကြားကားတွေပဲ ဆွဲပါတယ်။ ဟိုနားဒီနား ၅ဝဝ ကျပ်၊ ခရီးဝေးရင် ၁ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ခရီးသွားကြရပါတယ်။
ကျမတို့ အလှူခံလိုက် ကြီးကြီးဆီသွားပို့လိုက်နဲ့ နေ့တိုင်းလိုလို အလုပ်များနေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ခဏ ရပ်နားထားလိုက်ပါတယ်။ မီးကမလာတော့ gas ဆိုင် gas မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဓါတ်ဆီဈေးကလဲ ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ ရက်ကြာလာလေ ဓါတ်ဆီဈေး တက်လေပါဘဲ။ မုန်တိုင်းပြီးလို့ တပတ်သာကျော်လာပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသတွေဆီကို ဘယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဘယ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကမှ ရောက်မလာပါဘူး။ ရောက်လာတဲ့ စစ်တပ်ကလဲ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ရိက္ခာတွေကိုဝင်ပြီး စားသောက်နေပါတယ်။
အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ ရန်ကုန်မှာ မီးဒုက္ခအပြင်၊ ရေဒုက္ခပါရောက်လာပါတယ်။ ရေမရှိကြတော့ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက တာဝန်ရှိသူတွေက တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ရပ်ကွက်သားတွေက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ရေရရှိရေးကို လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ ကူဘိုတာတွေငှား၊ ဆီတွေဝယ်ပြီး ရေမောင်းတင်ကြရပါတယ်။ တချို့ရပ်ကွက်တွေမှာ ရေတွင်းရှိတဲ့လူတွေက ရေလှူကြပါတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်း စောင့်နေတဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေက ရေလှူတဲ့အိမ်တွေရှေ့မှာ အလံသွားစိုက်ပြီး။ ဟိုလူ့ကို တန်းစီခိုင်း၊ ဒီလူ့ကိုတန်းစီခိုင်းလုပ်လို့ စိတ်အချဉ် ပေါက်နေတဲ့ ရေတွင်းပိုင်ရှင်တွေက ရေလှူတာကို ရပ်လိုက်ကြပါတယ်။
ကျမတို့ လင်မယားလည်း အလှူခံလိုက်၊ ကယ်ဆယ်ရေးသွားလိုက်နဲ့ အိမ်မှာမနားဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီနေ့ကတော့ အိမ်မှာ ကျမ ကျန်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားက အပြင်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတခုက တောင်ဒဂုံရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ဆန်လိုက်ဝေ တယ်ဆိုလို့ ကျမလည်း သွားကြည့်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အပျက်အစီးများတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သွားဝေတာပါ။ စဝေဝေခြင်းမှာ လူတ ယောက်ကို ဆန် ၁၂ ပြည်နဲ့ ငွေ ၁,ဝဝဝ ကျပ် ဝေပေးပါတယ်။ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေက စည်းကမ်းတကျနဲ့ တန်းစီပြီးယူကြ ပါတယ်။ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာရင်ရဲ့အိမ်က TOSTA အိမ်ယာထဲမှာရှိပြီး ဆန်ဝေတဲ့နေရာနဲ့ ဝေးနေတော့ ရုတ်တရက် သူ မသိလိုက်ပါ ဘူး။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့မှ သိပြီး ရောက်လာပါတယ်။
ရောက်လာတာနဲ့ ဝေနေတာကို ရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဥက္ကဋ္ဌက သူ့ကိုအပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းအကြီးအကဲ က လည်း ချက်ချင်းတော့ မအပ်ပါဘူး။ ဥက္ကဋ္ဌက "အခုဝေချင်သလိုဝေတော့ ရတဲ့လူရပြီး၊ မရတဲ့လူကမရနဲ့ မညီမမျှဖြစ်မယ်၊ အိမ်တွေ က လူနဲနဲလေးပဲရှိပြီး ဆန်အများကြီးရမယ်၊ တချို့အိမ်တွေက လူများပြီးဆန်နည်းသွားတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် တဦးနဲ့တဦး မကျေနပ်ရာက ရာဇ ဝတ်မှုအထိ ဖြစ်နိုင်လုိ့၊ ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိသူတွေကပဲ စီမံခန့်ခွဲရမယ်လို့ အထက်ကအမိန့်ပေးထားတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။ "တ ကယ်လို့ သူ့ကိုမအပ်ရင် အထက်ကို အကြောင်းကြားရလိမ့်မယ်" လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်တော့ နောက်ဆုံး ဘုရားကျောင်းက အပ်လိုက် ရပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌက ဘုရားကျောင်းလူကြီးကို "လူတဦးကို ဆန် ၃ ပြည်နှုန်းနဲ့ ဝေပေးပြီး တအိမ်ထောင်ကို ၁,ဝဝဝ ကျပ် ပေးမယ်"လို့ ပြောပြီး အလှူပစ္စည်းတွေကို သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ခုနဝေပြီးသားလူတွေဆီက လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြန်လိုက်သိမ်းလိုက်ပြီး တအိမ်ထောင် ဆန် ၃ ပြည်နဲ့ ငွေသား ၃ဝဝ ကျပ် ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုတဲ့ဆန်နဲ့ ငွေသားတွေကိုတော့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ စွမ်းအားရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ဆန် ၃ အိပ်စီနဲ့ ငွေသားတသိန်းခွဲစီ ရသွားပြီး၊ နောက်လိုက်တွေကတော့ ငွေ ၅ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ဆန်တအိပ်စီ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ငလျင်ကြီးလည်းလှုပ်ရော ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကြားပေါင် ကိုယ်တိုင် ငလျင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို အားပေး တယ်ဆိုတော့မှ သတင်းစာကနေ မရှက်မကြောက် ဆောင်းပါးတခုရေးပါတယ် …
"ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်တဲ့ နေရာတွေကို ချက်ချင်းသွားချင်ခဲ့ပေမဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ယူထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ကြားကနေ ဝင် စွက်ဖက်သလို ဖြစ်မှာစိုးလွန်းလို့ ဆန္ဒတွေကို ထိန်းချုပ်ထားရတာပါ" တဲ့။
ဒါပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသတွေမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုသတင်းတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ က ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပေးတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေဟာ ဒုက္ခသည်တွေကိုဝေတဲ့ဆီ မရောက်ပါဘူး။ သံဈေးထဲမှာ၊ ညောင်ပင်လေးဈေး မှာ၊ ယုဇန ပလာဇာမှာ၊ city Mart အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကိုတော့ တားဆီး၊ ဖမ်း၊ ပြန်ခိုင်း ဆိုတာတွေကို နေ့စဉ်လုပ်နေပါတယ်။
အလှူရှင်တွေရောက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့နေရာက လူ တွေဟာ အလှူရှင်တွေဖြတ်သွားတဲ့ ကားလမ်း တွေအထိ ရောက်အောင်လာပြီး အလှူခံကြရပါ တယ်။ ဒါကို န.အ.ဖ က နိုင်ငံတော် သိက္ခာ ကျအောင်လုပ်တာပါဆိုပြီး။ အဲဒီလူတွေကို မလှူ ရဘူး၊ လှူရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမယ် လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
အတည်ပြုဘို့ ခက်ခဲတဲ့ သတင်းတွေအနေနဲ့ ကျမတို့ ကယ်ဆယ်ရေး လိုက်သွားတုန်းက ဒေ သခံပြည်သူတွေရဲ့ ပြောပြပုံအရဆိုရင်တော့ စစ် သားတွေဟာ ရွှံ့နွံတွေကြားထဲက ရွှေတိုရွှေစ တွေကို လိုက်စုတာ ၁ဝ ကျပ်သားလောက်အထိ ရသွားကြယုံမက ဒုက္ခသည်တွေဆီက ရွှေတိုရွှေစတွေဘာတွေတွေ့ရင် အတင်း ဓားပြတိုက်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာဘဲ န.အ.ဖ က ကြေညာပြန်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်က ထောက်ခံချက်ပေးရင် တအိမ်ထောင်ကို သွပ် ၅ ချပ် ရောင်းပေးမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်ရဘို့ ဥက္ကဋ္ဌ ကို အရင်အလှူငွေထည့်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့လူတွေ ၆ လသာကျော်သွား ရော သွပ် ၅ ချပ် မရကြပါဘူး။ သွပ်မရမချင်း အိမ်မမိုးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ အပြင်ကဝယ်ပြီး အိမ်မိုးကြရပါတယ်။ တကယ်က အိမ် ဆောက်ပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းကြတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ မပတ်သက်တဲ့လူဆိုတာ မရှိကြပါဘူး။ နောက်ဆုံး တော့ နာဂစ်ရဲ့ အကျိုးအမြတ်က စစ်အုပ်စုအတွက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ကျမတို့လည်း ရသမျှသတင်းတွေစုပြီး ကြီးကြီးဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။ ကြီးကြီးတို့ဆီကို တခြားကလဲ သတင်းတွေဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုဇာဂနာတို့ အနုပညာရှင်အုပ်စုက တောင်ဒဂုံမှာ ဆန်ဝေမယ်ဆိုတော့ ဆန်တွေကို တခါထဲအပြီး အထုပ်တွေနဲ့ထုပ်ပြီး လာသမျှလူကို တယောက်တထုပ် ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ကားပေါ်မှာပါတာက မင်းသားကျော်ရဲအောင်နဲ့ ဝေဠုကျော်ပါ။ ဒီတခါတော့ စွမ်းအားရှင်တို့က ပညာတမျိုးပေးပြန်ပါတယ်။ ကားပေါ်တက်ပြီး ဆန်ထုတ်တွေကို တက်လုတာပါ။ ဗလတောင့်တဲ့ မင်းသား ၂ ယောက်က တက်လုတဲ့လူ တွေကို လက်သီးစာဖိကျွေးလိုက်မှပဲ စည်းကမ်းတကျ တန်းဝင်စီကြပါတော့တယ်။
ကျမတို့ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ မင်္ဂလာဈေးထဲက မိတ်ဆွေတယောက်က ဆက်သွယ်ပါတယ်။ သူတို့မင်္ဂလာဈေးက ချုပ်ပြီးသား အထည်တွေလှူချင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ အလှူရှင်နည်းသေးတဲ့ နေရာကို စုံစမ်းပြီး သူနဲ့ကျမသွားလှူပါတယ်။ အဲဒီရပ်ကွက်က အရှေ့ဒဂုံက ၁၁ ရပ်ကွက်ပါ။ ကျမမိတ်ဆွေက ရ.ရ.က ရုံးကိုဝင်သွားပြီး အဝတ်လှူချင်ကြောင်းပြောတော့ ဥက္ကဋ္ဌက "အခုသူ့ကို ပေးခဲ့ ပါ။ သူ စိစစ်လိုက်ဦးမယ်၊ မနက်ဖြန်ကြမှ ဝေကြတာပေါ့" လို့ ပြောတော့ ကျမတို့ အင်္ကျီတွေထားခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တနေ့ တခါထပ် သွားတော့ မနေ့က ညနေမှာ သူတို့ဝေလိုက်ကြတယ်တဲ့၊ ဒီမှာဓါတ်ပုံတောင် ရိုက်ထားတယ်ဆိုပြီး ပြပါတယ်။ ကျမတို့လဲ မကျေနပ်ပေ မယ့် မထူးတော့တာမို့ ပြန်လာပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ တဲအိမ်လေးတအိမ်တွေ့တော့ ကျမ ဝင်မေးလိုက်ပါတယ်။ မနေ့က အင်္ကျီဝေတာ ရသလားဆိုတော့ အိမ်ရှင်ပြန်ဖြေပုံက "ရပါတယ်အမရယ် ဒါပေမဲ့ ဝတ်လို့ကို မရတဲ့ ဘေထုတ်အစုတ်အပြဲတွေပါ" ဆိုပြီး အင်္ကျီကို ထုတ်ပြပါတယ်။ ကျမက မကျေနပ်ပေမဲ့ ကျမမိတ်ဆွေက ကျမအတွက်စိုးရိမ်လို့ သူက "ဘာမှပြောမနေပါနဲ့၊ ဒီလိုပစ္စည်းဆိုတာ အပူတွေပါ၊ သူယူဝံ့လို့ယူတာ ယူပါစေ" တဲ့။ ဒါနဲ့ကျမလည်း စိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်။
တာမွေမြို့နယ် ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းထဲမှာနေတဲ့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌက သူရတဲ့ခွဲတမ်းထဲက ခေါက်ဆွဲ ၂ ပါကင်၊ ဘီစကွက် ၁ ပါကင်နဲ့ ခြင် ထောင် ၃ လုံး၊ စောင် ၃ ထည်ကို သူ့ရဲ့ခယ်မဆိုင်မှာတင်ရောင်းပါတယ်။ သတင်းရလို့ ကျမတို့သွားမေးတော့ ပစ္စည်းတွေကိုဖွက်ထား လိုက်ပါတယ်။ ဝယ်စားထားတဲ့ လူတွေဆီက ခေါက်ဆွဲခြောက်အိပ်ကိုယူပြီး ကိုဇာဂနာဆီကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ဒုက္ခသည် ရိက္ခာ တွေကို မ.ရ.က ဥက္ကဋ္ဌက ခွဲတမ်းချပြီး ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌတွေကို ဝေပေးတာပါ။
နိုင်ငံတကာက သိသွားတော့ ခွဲဝေယူတဲ့ကိစ္စတွေကို မလုပ်တော့ဘဲ ပစ္စည်းတွေကို ဂိုထောင်တွေထဲထည့်ပြီး ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း မဝေခြမ်းပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဂိုထောင်တွေထဲမှာ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုတာကို သူတို့စစ်တပ်ထဲ ကပဲ သတင်းထွက်လာပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေက ဆောက်တဲ့အိမ်တွေဟာ တလုံးကို ကျပ် ၆ သိန်းတန်တာမို့လို့ တကယ်ဘဝပျက်သွားတဲ့ လူတွေမဝယ်နိုင်ပါဘူး။ နောက် ဆုံးတော့ ကြံဖွံ့တို့ စွမ်းအားရှင်တို့ကပဲ ရသွားတာမို့လို့ နဂိုမြေပိုင်ရှင်တွေခင်မျာ နာဂစ်အပြီးမှာ အိမ်တွင်မကဘဲ မြေပါပျောက်ဆုံးသွား ကြရတာမို့ မိအေး ၂ ခါမကနာကြရပါတယ်။
အခုတော့ ဗမာပြည်သူတွေဟာ မုန်တိုင်းရဲ့ရှေ့ပြေး ကောင်းကင်ပြင်ကြီး နီရဲလာပြီဆိုမှဖြင့် ကိုယ့်ဘေး ကိုယ်ရင်ဆိုင်ကြရမှာမို့လုိ့ ကောင်းကင်ကြီးမနီအောင် ဆုတောင်းနေကြရပါပြီ။
ချင်းလူမျိုးစု ခရစ်ယာန်များအပေါ် နအဖ၏ ဖိနှိပ်မှု ဖြစ်ရပ်များ..။
စစ်ကိုင်း တိုင်း ကလေးမြို့နယ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (ကလေး) အနီး ရှိ ရပ် ဝေး ကျောင်းသား များ အဓိက ခြေချ ရာ ထိုမာ ကျေး ရွာ အုပ် စု သာယာဝတီ ရွာ ရှိ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် နည်းပညာ ကျောင်းသား များ ၏ အ ဆောင် တစ်ခု ဆောက် လုပ် ရန် စုဆောင်း ထား သော အိမ် ဆောက် ပစ်စည်း များ သို လှောင် ရာ မိုးကာ တဲ တစ် ခု ကို ကျောင်း ပိတ် ချိန်ကို အခွင့် ကောင်း ယူ ပြီး လူ ရမ်းကား တစု မှ သော့ ဖောက် ၀င် ရောက် ဖျက်ဆီး သွား ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် ထို နေရာ သို့ ရောက် ရှိ ခဲ့ သူ ကျောင်းသား တစ်ဦး ထံ မှ သိ ရှိ ရ ပါ သည်။ ယင်း အဆောင် သည် အဆောင် နေ ကျောင်းသား များ ဘုရား ၀တ် ပြု ခြင်း များ ပြု လုပ် နိုင် ရန် နှင့့်် ရပ်ဝေး မှ လာ သော ဆင်းရဲ ခက်ခဲ သည့် ကျောင်းသား များ စရိတ်သက်သာ စွာ ဖြင့် နေထိုင် ကျောင်းတက် နိုင် ရန် ရည် ရွယ် ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။
ယင်း အ ဆောင် ကို ဆောက် လုပ် နိုင် ရန်အတွက် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ က သူတို့ ၏ မုန့် ဖိုး ထဲ မှ ခွဲ ထုတ် စုဆောင်း ခဲ့ ကြ သည် မှာ ၉ နှစ် ကျော် ကြာ ပြီ ဖြစ် သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် မြေ ကွက် များ ၀ယ် ယူ နိုင် ပြီ ဖြစ် ရာ ယင်း နေရာ တွင် အုတ်မြစ် ကို လည်း စနစ် တကျ ချ နိုင် ခဲ့ သည်။ သို့ သော် ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနစ် များ ၌ အခက် အခဲ အ မျိုးမျိုး ကြောင့် ဆက်လက် မ ဆောက် လုပ် နိုင် တော့ ပေ။ ယင်း သို့ ဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ နေ. ၌ အုတ်မြစ် ပေါ် ၌တိုင် ထောင် ကာ ဆက်လက် ဆောက် လုပ် ခဲ့ ရာ ကလေး မယက ဥက္ကဌ ဥိး ကိုကိုလတ် ဦးဆောင် ၍ မ တရား တားမြစ် လာ သဖြင့် ဆောက် လက် စ ကို လက် စ မ သတ် တော့ ပဲ ချက်ချင်း ရပ် နား ခဲ့ ကြ သည်။ ယင်းကဲ့ ရပ် နား ခဲ့ သော် လည်း စစ် အစိုးရ အလိုကျ ပြုမူ လုပ် ဆောင် ကြ သည့် ကြံ့ဖွံ့ နှင့် စွမ်းအားရှင်လူမိုက် များ က ကျောင်းသား များ လုပ် အားဖြင့် ထောင် ထား သော တိုင် အား လုံး ကို ဥပဒေ မဲ့ လူစု လူဝေး အားကူး ၍ အာဏာ ပိုင် များ ၏ မြောက် ပေး မှု ဖြင့် ဆွဲံလှဲ ပြီး တိုင်ထောင် ရန် ချ ထားသော သံ ဖိနပ် အုတ် ခုံ များ ကို လည်း ထုခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ ကြ သည်။ ထိုပြင် အိမ် ဆောက် ရန် နှစ် ရှည် လရှည် စု ဆောင်း ထား သော သစ် သား များ ကို သာယာဝတီ ဥက္ကဌ အိမ် သို့ နွား လှည်း ဖြင့် မတရား သဖြင့် သိမ်း ဆည်း သယ် ဆောင် သွား ကြ သည်။ အဆိုပါ အဖြစ် အပျက် နှင့် ပတ်သက် ၍ ကလေးမြို့ ဒကစ မှုး ထံ တိုင် ကြား ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ တိုင် အောင် တရား မျှတ သည့် ဖြေရှင်း ချက် တစုံတခု မှ ထွက် မ လာ ခဲ့ ပေ။ ယင်း ကဲ့သို ဖျက်ဆီး ခံ ရ မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ မျက်မြင် ကျောင်းသား တစ် ဦး က ဖျက်ဆိး ခဲံ့ သည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး မှာ ကျပ် သိန်း ပေါင်း ၂၀ ကျော် ရှိ ကြောင်းပြော ကြား ခဲ့ ပါ သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင် မြို့နယ် နှင့် ကျေးရွာ အာဏာပိုင် များ ပူးပေါင်း ဖျက်ဆိး သော အိမ် ဆောက် ပစ်စည်း တန်းဖိုး ကျပ် သိန်း ပေါင်း ၂၀ ကျော် နှင် စာ လျှင် ယခု ပျက်ဆီး မှု ပမာဏ မှာ မ ပြောပ လောက် ကြောင်း အဆိုပါ ကျောင်းသား ထံ မှ သိရှိ ရ ပါ သည်။
မေးလ်မှပေးပို့ လာသောကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါသည်..။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, November 12, 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း(၁)နာရီခန့်တွေ့ဆုံခွင့်ရ။...။
ယနေ့ မနက်(၁၀)နာရီမှ (၁၁)နာရီအထိ (၁)နာရီခန့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
" ဒီနေ့မနက်(၁၀)နာရီကနေ(၁၁)နာရီအထိ (၁)နာရီကြာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင်ရခဲ့ပါတယ်။ အန်ကယ်တစ်ဦးထဲပါ။ ကိစ္စ(၂)ခု အတွက်ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုကအဖွဲ့ချုပ်တွင်း ကိစ္စ နောက်တစ်ခုက နေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့် ကျတဲ့ ကိစ္စပါ။ နေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့် ပါမစ်ကျတဲ့ အတွက် ဒေါ်စုနဲ့ ဗိသုကာတွေ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဖို့ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့သွားတဲ့ အဖွဲ့ချုပ် ကိစ္စအတွက် လောလောဆယ် ပြောပြလို့ မရသေးပါဘူး။ လုပ်ခိုင်းတာတွေ လုပ်ပေးပြီးရင် ပြောပြနိုင်ပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းက ဂျပန်သံရုံး အတွင်းဝန် အန်ကယ်ကို လာရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ တိုကျိုမဲခေါင် အစည်းအဝေးမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဟတိုယာမက ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်ကို ပြောကြားလိုက်တဲ့ အချက်တွေကို လာရောက် ပြောပြပါတယ်။ အန်ကယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့(၅)ရက်နေ့ ကြာသာပတေးနေ့က ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းလည်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ "ဟုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
စစ်အစိုးရမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံခွင့် ပေးခဲ့သည်မှာ ယခုအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခွင့် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံပြီးချိန်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ SANCTION နှင့်ပတ်သတ်တဲ့ကြေငြာချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြားတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆက်တိုက်ဆိုသလို အမေရိကန် အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။..။
သတင်း ပေးပို့ လာသူ...ဒီမိုဝေယံ..။
၈၉-နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်ဝါရင့်နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလွှာ..။
ပေးပို့ ပေးသူ ..ကိုလူချော..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ (၈၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ်.ကျင်းပ (ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း)..။
ဓာတ်ပုံ ပေးပို့ ပေးသူ ကိုနစ်နေမန်း..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ (၈၉) နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကြေငြာချက်..။
ပေးပို့ ပေးသူ UPG..။
တန်ဆောင်တိုင်လပြည့် နေ့သစ်သီးဝလံကပ်တာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံပါတာနဲ့ဘာလို့ဒီလောက် ကြောက်ရသလား နအဖရယ်။
ဒီဓါတ်ပုံတွေကတန်ဆောင်တိုင်လပြည့် နေ့ ကသန်လျင်ကျိုက်ခေါက်ဘုရားမှာကျောင်းသားတွေ
စရဖ နဲ့SB ခရက အဖွဲ့ တွေကပါ။
ဓာတ်ပုံ ပေး ပို့လာသူ ..ကိုလူချော..။
မှိန်ဖျော့ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ .....။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 11, 2009
၁၁ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားသူ၏ရှေ့နေများနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့်ရမည်။..။
မနက်ဖြန်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မနက် (၁၀)နာရီမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေလည်းဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
" မနက်ဖြန် မနက်(၁၀)နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်ကယ်သွားရောက် တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ အန်ကယ်တစ်ဦးတည်းပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးလိုက်တဲ့ ညွှန်ကြားချက် တွေကိုရေးပြီး ပြန်လည်ပေးအပ် ဖို့ပါ။ အသေးစိတ်တော့ ပြောပြလို့မရသေးပါဘူး"။ ဟုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....။
သတင်း ပေးပို့ ပေးသူ ..ဒီမိုဝေယံ..။
သုံးရောင်ခြယ်ကျောင်းသားကိုမြတ်စံ၏ ဖခင် ဦးမင်းနွယ်ဆွေရဲ့ ဈာပနဖိတ်ကြားစာ ၊ ဈာပနဓာတ်ပုံများ နှင့် ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း..။
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းစာဆရာ ဦးမင်းနွယ်ဆွေရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကိုသားဖြစ်သူ
မြစ်ကြီးနားထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လဲဖြစ် သုံးရောင်ခြယ်ကျောင်းသားလဲဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်စံ လာရောက်ခွင့် ရမယ်မထင်ဘူးလို့
သုံးရောင်ခြယ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလည်းဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်စံကို သူ့ဖခင် မဆုံးပါးခင် အသည်းအသန် ဖြစ်နေချိန်ကတည်းက ထောင်ကို သံကြိုး၇ိုက် အကြောင်းကြားခဲ့သလို ဆုံးပါးချိန်မှာလည်း မြစ်ကြီးနားထောင်ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ ညီမဖြစ်သူ မသူဇာဝင်းဆွေက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းစာဆရာ ဦးမင်းနွယ်ဆွေရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို
သားဖြစ်သူ မြစ်ကြီးနားထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ကိုမြတ်စံ လာရောက်ခွင့် ရမယ်မထင်ဘူးလို့ မိသားစုက ပြောပါတယ်။
“မောင်နှမတွေအကုန်လုံး တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ လုပ်နေပါတယ်၊ အသည်းအသန် ဖြစ်နေတယ်၊ ဆေးရုံတင်ထားတယ်ဆိုပြီး ရေးတာ။ ရေးပြီး ၂ ရက်နေမှ ဆုံးတာ။ ဆုံးတော့ မနေ့က ထောင်ပိုင်ကြီးဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုမြတ်စံ ကို အကြောင်းကြားပေးပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။” ကိုမြတ်စံကို မြစ်ကြီးနားထောင်ပြောင်းလိုက်ချိန်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမင်းနွယ်ဆွေက စပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ ကိုမြတ်စံထောင်ဝင်စာကို မိသားစုက အခုအထိ သွားမတွေ့နိုင်ကြပါဘူး။
ဖခင်ဖြစ်သူက မဆုံးပါးခင်မှာ သားဖြစ်သူ ကိုမြတ်စံကို တွေ့ချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိတယ်လို့လည်းညီမဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ကိုမြတ်စံရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးမင်းနွယ်ဆွေဟာ အိုးဝေဂျာနယ်နဲ့ကြေးမုံသတင်းစာ
တွေမှာ ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားခဲ့သူ သတင်းစာဆရာ တဦးဖြစ်သလို ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် စာနယ်ဇင်း
အဖွဲ့ရဲ့ နာယက အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမြတ်စံရဲ့မိခင်ဖြစ်သူက ဆိုဗီယက်ပြန် အကနည်းပြ ဆရာမကြီး ဒေါ်ဝင်းဝင်းဝါဖြစ်ပြီး ညီဖြစ်သူ ကိုစိုးနိုင်တို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကျောင်းသား
ကျမ မြတ်လေးငုံ ကလဲ ကိုမြတ်စံ ၏မိသားစုနှင်ထပ်တူထပ်မြတ်ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါတယ် ကိုမြတ်စံ.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 10, 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦး ထပ်မံတွေ့ခွင့်ရမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံ အမှုအတွက် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦးလုံး ယနေ့ နေ့လည် (၁)နာရီမှ (၃)နာရီအထိ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေလည်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။....
“ ဒီနေ့ အန်ကယ်တို့ နေ့လည် ၁ နာရီကနေ ၃ နာရီအထိ ဗဟိုတရားရုံးအယူခံကိစ္စအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အယူခံကိစ္စအတွက် တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ ”
“ အန်ကယ်တို့ ရှေ့နေ ၄ ဦးလုံး တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ”
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခု အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်တော့မပြောပါဘူး။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ပြောပြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ် သတ်ပြီး စေတနာလဲရှိကြပါတယ်။ အားကြိုးမာန်တတ်လဲ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။ အခုလို ဧည့်သည်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ နအဖကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ မပြောပါ ဘူး။ ကျန်တဲ့ဟာကတော့ အမှုကိစ္စတွေပဲ ဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် နက်ဖြန်၊ သဘက်ခါ ထပ်တွေ့ ဖို့လဲ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။"
ဆက်လက်ပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မကြာခင်မှာ လွှတ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်ဖြစ်သူ ဦးမင်းလွင်မှ မနီလာလေဆိပ်တွင် AP သတင်းဌာနသို့ပြောကြားသွားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ " အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အန်ကယ်တို့ ဘာမှမှတ်ချက်ပေးစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှညွှန်ကြားချက် ပေးထားတာလည်း မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီသတင်းမှန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်... ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုသွားပါတယ်။
သတင်း ပေးပို့လာသူ ..ဒီမိုဝေယံ။...။
အမေ ဒေါ်နုနုအေး ရဲ့ (၁)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ....။
တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။၁၉၈၈ ကာလ တပ်မှူးကြီးဟောင်းများ ညီလာခံတွင် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သံလွင်စခန်းရှိ စခန်း (၁)(၂)(၃) တို့ ၏ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးအနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သေဘောဘိုး စခန်း ၊ကော့မူးရာ စခန်းတို့ ၌ ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးကို စတင်ဖွဲ့စည်း ရာတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ သံလွင်စခန်းရှိ ကျောင်းသားနှင့် ပြည်သူ ၁၄၀၀ ရောက်ရှိသည့်အနက် စခန်းကော်မတီဝင် သုံးဦးရွေးချယ်ကြရာ ဒေါ်နုနုအေးသည် တစ်ဦး အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူ ဒေသသို့ သူမ ရောက်ရှိလာပြီး ရဲဘော် ဟောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံကာ တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကို ဖောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ် မယ့်စရီယန်း ဒေသသို့ သူမ ရောက်ရှိလာပြီး ရဲဘော် ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ တနေရာ၌ ယာယီရုံးဖွင့်လှစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ မျိုးချစ် စစ်သည် ဟောင်းများ အဖွဲ့ (PWVB) ကိုဖွဲ့ စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မေလတွင် ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်း(၃)၌ တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြန်လည်ထမ်း ဆောင်ရန် လာခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ မဲဆောက်သို့ တက်ရောက်အနားယူကာ ဒီမိုကရက်တစ် ရဲဘော်ဟောင်းများ အဖွဲ့ တွင် နာယကအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်နုနုအေးသည် ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာသော ရဲဘော်များ၊ ကလေးစစ်သားများကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ကာ ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး စခန်းကို ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက် (ဘုရားသား၊ ကျောင်းသား၊ တပ်မတော်သား) တည်းဟူသော သားသုံးသား ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းကာ ဥက္ကဌအဖြစ် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့ အပြင်၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သားသုံးသားနှင့်ပြည်သူညီ၊ အာဏာရှင်တွေ ဘာလဲ ဘယ်လဲ အမည်ရှိ စစ်အစိုးရကို ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်သည့် သံချပ်ခွေကို ဦးဆောင်တင်ဆက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
အမေဒေါ်နုနုအေး အား ကျမ မြတ်လေးငုံ မှ အမှတ်ရအောက်မေ့စွာဖြင့်
(၁)နှစ်ပြည့် သွားသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် အမြဲတမ်းလေးစား ဂုဏ်ပြု
ဒီမိုကရက်တစ်ရဲဘော်ဟောင်းများ(မြန်မာနိုင်ငံ)နာယကဖြစ်သူဒေါ်နုနုအေးသည်(၁၉၈၈)လူထုအရေးတော်ပုံကြီး စတင်သည့် ကာလမှာပင် တပ်မတော်(လေ)ကိုယ်စားပြု စစ်သမီးအဖြစ် ရာထူးတာဝန်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ပြည်သူ့ဘက်မှ ရပ်တည်၍ တပါတီအာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံး ရေးအတွက် အသက်ကိုပဓာနမထားဘဲ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်း (နအဖ)စစ်တပ်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရဲဘော်များကို ပြန်လည်ပြုစု ပျိုးထောင်းရေးတာဝန်များကို နယ်စပ်ဒေသများတွင် ကွယ်လွန်ချိန်ထိ ထမ်းဆောင်နေရင်း အသက်(၇၀)နှစ် အရွက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, November 09, 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦး တနင်္လာနေ့ နေ့လည် (၁)နာရီတွေ့ခွင့်ရမည်။
မနက်ဖြန် တနင်္လာနေ့နေ့လည် (၁)နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံ အမှုအတွက် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦးလုံး တွေ့ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေလည်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
" မနက်ဖြန်နေ့လည် (၁)နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်ကယ်တို့ရှေ့နေ(၄)ဦး ဗဟိုတရားရုံး မှာ အယူခံတင်သွင်းဖို့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တွေ့ခွင့်ရပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ကစာတင် တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီတခါတော့ ရှေ့နေ(၄)ဦးလုံး တွေ့ခွင့်ရမှာပါ။ အဓိကကတော့ အယူခံအမှုအတွက် ပြန်တင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်"။ ဟု ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်း ကပြောဆိုပါတယ်။
.....ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းများက အယူခံကိစ္စအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေဆုံခွင့်ပြုရန် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ တောင်းဆိုစဉ်က အာဏာပိုင်များက ရှေ့နေ(၄)ဦး စလုံးအား တွေ့ခွင့်မပေးပဲ (၂)ဦးစီသာ ခွဲပြီး တွေ့ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့က တိုင်းတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံအမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ် ။ ယခု ဗဟိုတရားရုံးကို ဆက်လက်အယူခံ တင်သွင်းဖို့အတွက် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်အတွက် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။..။
သတင်း ပေးပို့ လာသူ ...ဒီမိုဝေယံ...။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရတင်ဦး၏ တပ်မတော် အတွင်းမှ
တပ်မတော်သားများ သာမက ပြည်သူများကပါ လေးစား
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ကျော်ထင် ရဲ့  PA ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီး အုံးကျော်မြင့် ဦးစီးပြီး ထိပ်ပိုင်း အရာရှိ တချို့ရဲ့  တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု ဖြစ်ပွားလာကာ ဗိုလ်နေ၀င်းအားဖြုတ်ချပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ တင်ဦးကို ခေါင်းဆောင် ပြန်တင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ရာ မျက်မှန်ကြီး ဗိုလ်တင်ဦးက လက်ဦးမှု ရရှိသွားတာကြောင့် မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်းမှာလည်း ကျောင်းသားများက “ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ တင်ဦး သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ” လို့ ဆုတောင်း ကြွေးကြော် ကြတဲ့အတွက် ဗိုလ်နေ၀င်းက ပိုမို ဒေါသူပုန်ထလာ ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ တင်ဦးရဲ့  ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့
ကိုဖိုးတရုတ် ဘလော့မှ ပြန်လည် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်..။ဗိုလ်ထက်မင်း ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..။
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ ဘဘဦးတင်ဦး ဇနီး ဒေါက်တာတင်မိုးဝေ
တို့ရဲ့ နှစ်(၅၀) ပြည့်ရွှေရတု မွေးနေ့ မှနေပြီး ဘဘဦးတင်ဦးရဲ့ ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်
သို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲု့ မှတ်မှတ်ရရ
အဖြစ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ရှင် ...။
ကျမ မြတ်လေးငုံ ကပြန်လည်ပြီးမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်..။ဘဘဦးတင်ဦးအား
မြတ်လေးငုံဘလော့မှ ထပ်မံ ပြီးဖော်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..။ကျမ ဘဝတွင်
ဘယ်တော့မှာ မမေ့သင့်သော ဘဘဦးတင်ဦး အား မြတ်လေးငုံ ဘလော့မှအမှတ်တရ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, November 08, 2009
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ စာပေအနုပညာ
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ ထင်ရှားသူတွေက စာပေအနုပညာများ ဖန်တီးတာတွေ၊ စာပေအနုပညာသမားတွေက နိုင်ငံရေးလောကထဲ ပါဝင်လှုပ်ရှားတာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နယ်ပယ် ၂ ခုစလုံးမှာ အပြည့်အဝ ပါဝင်ကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နု၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်၊ စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့် စသဖြင့် ထင်ရှားသူတွေက အများကြီးပါ။
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ ထပ်ပြီး ထည့်နိုင်သူတစ်ဦးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ထုတ်ဝေထားတဲ့ စာအုပ်တွေက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဖြစ်နေတော့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိနေသူ အများစုနဲ့ လက်လှမ်းမမီနိုင်သလို၊ လက်လှမ်းမီလို့ ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် ရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေက ကိုယ့်စာအုပ်စင်မှာ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် မထားဝံ့တဲ့ အနေအထား။ ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စာပေအနုပညာအကြောင်း ပြည်သူတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စာပေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်လှမ်းမီသမျှ တင်ပြချင်ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံလို့ အများက အကြမ်းဖျင်း သိထားကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ် ၄ အုပ်ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီစာအုပ်တွေကတော့ Let's Visit Nepal၊ Let's Visit Bhutan၊ Let's Visit Burma နဲ့ Aung San စာအုပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ ‘မြန်မာပြည်က လာတဲ့စာ’လို့ မြန်မာပြန်ဆို ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ‘Letters from Burma’၊ ‘ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး’ လို့ ဒေါက်တာအောင်ခင် မြန်မာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ‘Freedom from Fear’ စာအုပ်နဲ့ ‘The Voice of Hope’ စာအုပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးသားဖူးတဲ့စာအုပ် မရှိဘူးလို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာဘာသာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကတော့ မူရင်း William Ury ရဲ့ ‘Getting Pass No’ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ပြန်ဆိုထားတဲ့ ‘ဟင့်အင်း ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း’ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြန်ဆို ရေးသားပြီး ကိုယ်တိုင်စာအုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်သာ ကန့်သတ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စာဖတ်ဝိုင်းတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို HRDU လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတင်ဌာနက ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဝါသနာတွေထဲမှာ စာဖတ်ခြင်းက ရှေ့ဆုံးမှာ ရှိနေပါတယ်။ စာဖတ်ဝါသနာနဲ့ စိတ်စေတနာ ပေါင်းစပ်ပြီး စာပေရေးသားဖြစ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ် ရဲ့ တိုက်တွန်းကူညီမှုတွေကလည်း အထိုက်အလျောက် ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေဟာ အခုဆိုရင် အုပ်ရေ သန်းနဲ့ချီအောင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Let's Visit လို့ အစချီထားတဲ့ စာအုပ်တွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်တွေကို အလည်အပတ်သွားဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ စာအုပ်တွေလို့ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံပေါင်းများစွာအကြောင်း တစ်နိုင်ငံချင်း ထုတ်ဝေထားတဲ့ ဒီစာအုပ်တွေမှာ တခြားစာအုပ်တွေကို မတွေ့ဖူးပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ် ၃ အုပ်မှာတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို မလာချင် လာချင်အောင် ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အရေးအသားတွေ လုံးဝ မတွေ့ရပါဘူး။ အဲဒီစာအုပ်တွေထဲမှာ အကြမ်းအားဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ ပထဝီအနေအထား၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်း ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် စုံစုံလင်လင် ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လောက် သိသလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာတဲ့အခါ စစ်အာဏာပိုင်တွေက ‘တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော် နေခဲ့တဲ့သူက မြန်မာပြည်အကြောင်း ဘယ်လောက် သိမှာလဲ’လို့ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကို ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ‘သိလွန်းလို့တောင် ခက်နေတယ်’ လို့ တုံ့ပြန်ပြောဆိုဖူးပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာ အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Let's Visit Burma စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ရင်ပဲ သိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝပုံ၊ ခေတ်ဟောင်းသမိုင်းနဲ့ ရာဇဝင်၊ လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည် တည်ထောင်ခြင်း၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများ၊ မြန်မာ့ဓလေ့ စသဖြင့် အခန်း ၇ ခန်းခွဲပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ နေရာဒေသတွေ အကြောင်း ရေးသားတဲ့အခါ ‘မော်လမြိုင်က အစား၊ မန္တလေးက စကား၊ ရန်ကုန်က အကြွား’ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားမျိုး ထည့်သွင်းရေးသားတဲ့အပြင် လယ်ယာလုပ်ငန်းအကြောင်း၊ တောင်ယာခုတ်ခြင်း အကြောင်းတွေကို အသေးစိတ် ရေးသားထားတာမို့ မမြင်ဖူးတဲ့သူတွေတောင် စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆ မြင်ယောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ သစ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျင်း ရေးသားထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကိုတော့ မျိုးနွယ်စုတွေ ဆင်းသက်လာပုံ၊ မွန်လူမျိုးများ အခြေချပုံ၊ ပျူခေတ် ပုဂံခေတ် တောင်ငူခေတ် အင်းဝခေတ် ကုန်းဘောင်ခေတ် နောက်ဆုံး ကိုလိုနီခေတ် စသဖြင့် တော်တော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားထားပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်ကနေ ပထမဆုံး စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီ တဖြစ်လဲ မဆလပါတီအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ အခန်းမှာတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲနေတဲ့ တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုပါ ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံများကို ရေးသားရာမှာတော့ အခြေခံ ဘာသာရေး အဆုံးအမများအကြောင်း ရှင်းလင်းရေးသားထားပြီး ကောင်းသောမြင်ခြင်း၊ ကောင်းသောကြံခြင်း၊ ကောင်းစွာဆိုခြင်း၊ ကောင်းသောပြုခြင်း၊ ကောင်းသော အသက်မွေးခြင်း၊ ကောင်းသော အားထုတ်ခြင်း၊ ကောင်းသော အောက်မေ့ခြင်း၊ ကောင်းသော တည်ကြည်ခြင်း ဆိုတဲ့ မဂ္ဂင် ၈ ပါးအကြောင်း၊ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်အကြောင်း၊ ရတနာ ၃ ပါး၊ သံသရာ နိဗ္ဗာန် စတဲ့အကြောင်းတွေ၊ မွေးနေ့ကို အစွဲပြုပြီး အမည် မှည့်ခေါ်ပုံတွေ၊ နတ်ကိုးကွယ်မှုအကြောင်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှင်းလင်း ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်လောက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာ တချို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စာပေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကိုပါ ထည့်သွင်းပြောပြမှ ပြည့်စုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စာတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့ လုံလောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့စာပေတွေကနေ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ သဘောထားများကိုလည်း ချဉ်းကပ်ကြည့်ရှုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပိုပြီး ရုပ်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
ရင်းမြစ် ..ဆရာ ထိန်လင်း (မိုးမခ)
ဦးသန်းရွှေ လက်တွဲလျှောက်နေရပြီး ရှင် ကြည့်လိုက်ြ...
၁၃ ရက်နေ့ရ ဘဘဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုညီည...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွ...
နို့ဘိုး ယာယီဒုက္ခသည် စခန်းကို ထိုင်းဘက်မှ ဖိအားပေး...
ချင်းလူမျိုးစု ခရစ်ယာန်များအပေါ် နအဖ၏ ဖိနှိပ်မှု ဖြစ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီးဦးဥ...
၈၉-နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ (၈၉)နှစ်မြောက် အမ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ (၈၉) နှစ်မြောက်အမျ...
တန်ဆောင်တိုင်လပြည့် နေ့သစ်သီးဝလံကပ်တာ ဗိုလ်ချူပ်...
မှိန်ဖျော့ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ...
၁၁ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားသူ၏ရှေ့နေများနှင့်...
သုံးရောင်ခြယ်ကျောင်းသားကိုမြတ်စံ၏ ဖခင် ဦးမင်းနွယ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦး ထ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ(၄)ဦး တ...
ယနေ့ ထက်တိုင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော NLD ဒုဥ...
သံတိုင်ကြား က လရောင်ဆီသို့....။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မနီမိုလှိုင် ကျန်းမာရေး ဆိုးရွ...